March 2018 - Ceelhuur Online
March 31, 2018 admin175
Ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada Ahlu Sunna oo dhowaan la isku dhafay ayaa bilaabaya howgal ka dhan ah Al-shabaab Madaxwaynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo kahadlayey munaasabad lagu mideynayey ciidamada Galmudug iyo Ahlu suna oo horey u kala ahaa Ahlu Sunna iyo Galmudug ayaa sheegay in qorshaha Galmudug ay kula dagaalamayso Al-shabaab […]
March 31, 2018 admin156
Shirkaan looga hadlayey Amniga Deegaanada Galmudug ayaa Maanta lagu qabtay Magaalada Dhuusamareb ee Caasimadda Dawlad Goboleedka Galmudug, waxaana shir gudoominayey Madaxweyne ku-xigeenaka Maamulka Galmudug Maxamed Cabdi Xaashi. Kulanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay taliyeyaasha Ciidamada, maamulka, wasiiro iyo guddoomiyeyaasha Mudug iyo Galgaduud. Madaxweyne ku-xigeenka Maamulka Galmudug Maxamed Cabdi Xaashi ayaa kulanka kadib waxa uu sheegay […]
March 31, 2018 admin179
Farmaajow Doorkaaga Ku Dabar!! Madaxwayne Maxamed C/laahi (Farmajo) maanta baajiyay Kulankii Laba geesoodka ahaa ee Golaha Shacabka oo lahaa ajando ee kala duwan, Garabka Gudoomiye Jawaari oo ujeedkoda ahaa inay iskugu yimaadaan Kulankii Caadiga ahaa ee Golaha Shacabka ayaduu Ajanduhu ahaa Arinta Xuuduuda Balad-Xaawo,Halka ku xigeenkiisa koobaad Cabdiwali Ibraahim Muudey iyo Garabkiisa oo ka Shidaal […]
March 31, 2018 admin1711 Comment on Kullankii Golaha Shacabku uu maanta yeelan lahaa oo Baaqday
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay kulan la qaatay Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay uu khilaaf ka dhex taagnaa. Madaxweynaha ayaa kala hadlay Guddoonka sidii loo hakin lahaa Khilaafka xooggan ee ka dhex taagan Xildhibaanada Golaha Shacabka. Kulanka Madaxweynaha uu qaatay Guddoonka Baarlamaanka ayaa sidoo kale waxaa joogay Guddoonka Aqalka Sare. Waxaa […]
March 30, 2018 admin185
XAALADA DALKU UU KUJIRO:- Marka aad ka eegto dhan kasta marxaladda uu dalkeenu ku jiro, waa mid rajo aad u balaaran laqabo ayna socdaan mashaariic horumarineed hadana waxaa kuusoo baxaysa in eynaan sidi la rabay ama shacabku rabi lahaayeen aanan loo wajahin xaaladaha qaar, tusaale ahaan; mooshinka: mooshinka waxay ahayd in wax lagu saxo lkn […]
Daawo Xeraale : Banaanbax lagu diidan yahay Barlamaanka cusub Galmudug
March 30, 2018 admin199
Deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka dhacay Banaanbax looga soo horjeedo Barlamaanka cusub ee Galmudug, Bulshada Xeraale ayaa diidan in Ururka Ahlu sunna oo dagaal kala dhaxeeyo u soo xulaan xildhibaanada ay ku lahaayeen Barlamaanka cusub ee Galmudug. Masuuliyiinta iyo qeybaha bulshada oo goobta ka hadlay ayaa aad uga soo horjeestay waxa ka […]
March 30, 2018 admin211
March 30, 2018 admin239
The World Bank and the Food and Agriculture Organization (FAO) released today a new joint report titled, Rebuilding Resilient and Sustainable Agriculture in Somalia, outlining the challenges and opportunities for Somalia’s agriculture sector. According to the findings of the report, over the past three decades, Somalia’s livestock and crop subsectors have been buffeted by an increasingly fragile […]
March 30, 2018 admin393
“Aabe gabadha waa ina Jaamac Sandhool, Jaamac Shandhoolkii aan…” “War Jaamac Sandhool wan aqaane, caruurtiisa wax ku le’egba laguma arkee..”. “Aabe waa lagu arkaa, adiga kooxda waa weyn baad taqaannaa kaliya. Gabar baa jirta reerka u yar, oo hadeer uun madaxa keentay” “Warka waa dhanyahay. Insha Allah waan wacayaa Jaamac, Jimcahaanna in aan u tagno […]
March 29, 2018 admin170
Guddiga Joogtada Aqalka Sare ayaa goor dhow kala diray Guddigii uu u xil saaray xalinta khilaafka Golaha Shacabka, kaddib markii ay ku guuldareysteen waan waantii ay ka dhex wadeen labada dhinac. Kulan Guddiga Joogtada uu isugu yimid ayaa waxaa shir guddoominayay Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxaana la sheegay in saddex ka mid ah […]